Epistily ho an'ny Galatiana - Wikipedia
Epistily ho an'ny Galatiana
Ny Epistily ho an'ny Galatiana na Taratasin'i Masindahy Paoly ho an'ny Galatia dia boky hita ao amin'ny Baiboly, ao amin'ny Testamenta Vaovao izay isan'ny atao hoe epistily. Taratasy nalefan'ny Apostoly Paoly ho an'ny fiangonana kristiana tany Galatia izany. Teo anelanelan'ny taona 50 sy 60 no nanoratana azy. Misy toko 6 ity boky ity.
Vao eny am-piandohan'ny taratasy i Paoly dia manambara ny tenany ho apostoly marina ary ny fampianarany dia fampianarana marina (Gal. 1.1-10). Nisy mantsy ireo izay nilaza fa apostoly sandoka manao fampianarana tsy izy i Paoly. Ny asa famitana iraka ataon'i Paoly dia avy amin'i Kristy sady nahazo fankatoavana avy amin'ireo Apostoly ao Jerosalema izy (Gal. 1.18 - 12.10). Nanitsy an'i Petera i Paoly raha nitsahatra tamin'ny fiaraha-misakafo tamin'ny Kristiana jentilisa / jentily izay tsy nanaraka ny Lalàn'i Mosesy (Gal. 2.1-18). Ny finoana irery ihany, hoy i Paoly, no mahavonjy, hatramin'ny andron'i Abrahama izany tamin'ny nahazoany fampanantenana avy amin'Andriamanitra. Mijoro ho vavolombelona i Paoly fa velon'ny finoany an'i Kristy (Gal. 2.19-20).
Ity taratasy ity dia miresaka momba ny iray amin'ireo loza mananontanona ny Fiangonana amin'ny fotoana rehetra, dia tsy inona izany fa ny fianteherana amin'ny Lalàna. Mamaritra ny tena fahafahana kristiana io taratasy io, dia ny fahafahan'ny zanak'Andriamanitra.
2 Toerana sy fotoana nanoratana
3 Zava-misy manodidina sy famintinana
4 Fizaràn'ny boky:
4.1 Ny Vaovao Mahafaly torin'i Paoly
4.2 Tsy araka ny fomban'olombelona izany Vaovao Mahafaly izany
4.3 Fanatanterahana ny fahalalahana omen'ny Vaovao Mahafaly marina
Επιστολή προς Γαλάτες / Epistolê pros Galates no anarany amin'ny teny grika ary Epistula ad Galatas kosa amin'ny teny latina.
Ny Protestanta malagasy sy ny ankamaroan'ny Kristiana malagasy tsy katolika dia manao hoe Epistily ho an'ny Galatiana (hafohezina amin'ny hoe Galatiana) fa ny Katolika malagasy kosa manao azy hoe Epistolàn'i na Taratasin'i Masindahy Paoly ho an'ny Galatianina (hafohezina amin'ny hoe Galatianina).
Toerana sy fotoana nanoratana[hanova | hanova ny fango]
Ny Epistily ho an'ny Galatiana dia epistily nosoratan'i Paoly ho an'ireo fiangonana naoriny tamin'ny iray amin'ireo diam-pamitana iraka (misiona) tantaraina ao amin'ny Asan'ny Apostoly. Amin'ny mpikaroka sasany dia tao amin'ny faritra afovoan'i Azia Minora (ao Torkia ankehitriny) izay novakivakin'i Paoly tamin'ny diany faharoa sy fahatelo ireo fiangonana ireo. Ny mpandinika hafa indray dia milaza fa tao amin'ny faritany romanan'i Galilea (na Galilia) ao atsimon'i Azia Minora izay nandalovan'i Paoly tamin'ny diany voalohany ireo fiangonana ireo. Ity taratasy ity dia mety ho ny taratasy voalohany indrindra nosoratan'i Paoly. Mety tamin'ny taona 49 taor. J.K. no nanoratany azy, taloha kelin'ny fivoriana (konsily) natao tao Jerosalema. Maro koa ny milaza fa teo anelanelan'ny taona 50 sy 60 no naoratana azy.
Zava-misy manodidina sy famintinana[hanova | hanova ny fango]
Ireo fiangonana tao Galatia ireo dia novangian'ny mpitoriteny jiosy taorian'ny fandaozan'i Paoly an'i Galatia. Ireo mpitoriteny jiosy ireo dia nanaratsy ny filazan'i Paoly ny tenany ho apostoly sady nanamafy ny tokony hanajana ny Lalàn'i Mosesy (na Lalàn'i Môizy) sy ny firavoravoana jiosy ary ny famorana.
Novalian'i Paoly tamin'ny voalohany ny filazana azy ho tsy tena apostoly izay niteraka ahiahy ny amin'ny lanjan'ny Filazantsara izay toriny. Nambarany fa azony tamin'ny alalan'ny fanambaràna mivantana avy amin'i Kristy nitsangana tamin'ny maty ny Vaovao Mahafaly toriny (Gal. 1). Avy eo nanohana azy ny apostoly hafa (Gal. 2.1-10). Narovany koa aza ny tena Filazantsara marina teo imason'i Petera tao Antiokia (Gal. 2.11-21).
Manaraka izany dia namaly ireo izay te hanery ny Kristiana jentilisa hanatanteraka ny fomba jiosy i Paoly (Gal. 3.1 -- 4.12). Nolazainy fa marina amin'ny finoana ny Kristiana, araka ny fampanantenana nataon'Andriamanitra tamin'i Abrahama (Gal. 3.1-4).
Nampahatsiahiviny avy eo ny anjara asan'ny Lalàna, izay mitondra mankeo amin'i Kristy, ka nampitahainy amin'ny anjara asan'ny finoana (Gal. 3.15-29). Amin'i Paoly dia manova sata ny Kristiana ny finoana an'i Jesosy Kristy, ka tsy andevo intsony ny Kristiana fa tonga zanaka (Gal. 4.1-11).
Mamporisika ny Kristiana galatiana i Paoly dia mba hitoetra amin'ny fahafahana nomen'i Kristy azy ireo tamin'ny fisarahana amin'ny fahavalon'izy ireo (Gal. 4.12-5.12), avy eo dia nilazalaza ny amin'ny hoe fiainana vokatry ny Fanahy Masina i Paoly (Gal. 5.13--6.10).
Fizaràn'ny boky:[hanova | hanova ny fango]
Azo zaraina telo ny epistily:
- Ny Vaovao Mahafaly torin'i Paoly (1- 2.)
- Tsy araka ny fomban'olombelona izany Vaovao Mahafaly izany (3 - 4.)
- Fanatanterahana ny fahalalahana omen'ny Vaovao Mahafaly marina (5 - 6)
Ny Vaovao Mahafaly torin'i Paoly[hanova | hanova ny fango]
Teny fiarahabana (1.1-5)
Ozona ho an'izay mitory vaovao mahafaly hafa (1.6-10)
Tsy avy tamin'olombelona ny Vaovao Mahafaly marina (1.11-12)
Iraky ny Vaovao Mahafaly i Paoly (1.13-24)
Apostolin'ny Jentilisa i Paoly (2.1-10)
Miaro ny Vaovao Mahafaly marina i Paoly (2.11-21)
Tsy araka ny fomban'olombelona izany Vaovao Mahafaly izany[hanova | hanova ny fango]
Ny vokatry ny finoana (3.1-5)
Ny finoan'i Abrahama (3.6-14)
Ny fanarahana ny finoan'i Abrahama (3.15-29)
Ny navotana no afaka ho mpandova (4. 1-7)
Tombontsoa avy amin'ny fandraisana ny finoana (4.8-20)
Taranak'i Saraha sy taranak'i Hagara (4.21-31)
Fanatanterahana ny fahalalahana omen'ny Vaovao Mahafaly marina[hanova | hanova ny fango]
Fahafahana ho amin'ny fitiavana (5.1-6)
Ny amin'ny aim-panahy (5.7-12)
Fahafahana ho amin'ny fitiavana (5.13-15)
Ny asan'ny nofo mifanohitra amin'ny vokatry ny fanahy (5.16-26)
Ny tokony hifampitondrana izay mavesatra (6.1-5)
Samy hijinja izay nafafiny (6.6-10)
Teny famaranana (6.11-18)
↑ Jereo: Asan'ny Apostoly 16.6; 18.3
↑ Jereo: Asan'ny Apostoly toko faha-13 sy faha-14.
↑ Jereo: Asan'ny Apostoly toko faha-15.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Epistily_ho_an%27ny_Galatiana&oldid=1038762"
Voaova farany tamin'ny 12 Oktobra 2021 amin'ny 08:51 ity pejy ity.